Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya xilkiisu dhammaanayo, Cabdiweli Maxamed Cali ayaa sheegay in guddigan ay qiimeyn ku sameyn doonaan fatahaadihii uu webiga Shabeelle sameeyay, kaddibna dowladdu ay gurmad u fdidin doonto.
"Guddigan la magacaabay maanta waxaa madax u ah wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah ee Soomaaliya, Cabdullaahi Goodax Barre, waxayna sameyn doonaan qiimeyn si dadka reer Baladweyne ee fatahaaddu saameysay loo caawiyo," ayuu yiri C/weli Gaas.
Sidoo kale, Gaas wuxuu sheegay in hay'adaha gargaarka uu ugu baaqayo inay gacan siiyaan dadka waxyeelladu kasoo gaartay fatahaadaha, isagoo ka mahad-celiyay gacantii ay ciidamada AMISOM, kuwa maamulka gobolka iyo kuwa Itoobiya siiyeen shacabka Baladweyne markii ay fatahaaddu dhacday.
Magaalada Baldweyne ayaa horraantii toddobaadkan waxaa ka dhacay fatahaad waxyeello ballaaran u geystay xaafado ka tirsan magaalada, taasoo ay ku dhinteen dad ka badan 30-qof, sidoo kalena ay ku baaba'een xoolo fara badan oo nool ayna ku dumeen boqolaal guri.
Guddigan ayaa waxay magacaabiddiisu imaanaysaa xilli uu madaxweynaha Somalia booqasho ku tagay maalin ka hor magaalada Baladweyne, isagoo sheegay inay wixii ay awoodaan ay qaban doonaan, wuxuuna xusay in dhibaatada gaartay shacabka Baladweyne ay tahay mid aad uga xanuunsanayaan.
Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha xilligiisu dhammaanayo wuxuu soo dhaweeyay qabsahada magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada hoose, isagoo xusay inay muujinayso in Al-shababa ay ku hungoobeen hadafkoodii ahaa inay dalka kasii wadaan dhibaatada.